पट्टे ग्यारेन्टी के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा हेर्नुहोस्
सुरु ऋण wiki भाडा ग्यारेन्टी
भाडाको ग्यारेन्टी के हो?
मान्नुहोस् कि तपाई अपार्टमेन्ट भाडामा लिनु हुन्छ, तर पहिले नै पहिले नै थाहा छ कि तपाईंसँग एक नकारात्मक Schufa प्रविष्टि छ? नियमको रूपमा, तपाईंले पट्टि प्राप्त गर्नुहुने छैन, किनभने यो प्रविष्टि तपाईंको लागि विपत्ति हुन सक्छ। यो सँधै भाडामा राखिएको अपार्टमेन्ट प्रयोग गर्नु अघि आफैलाई कुनै पनि नकारात्मक शुफ प्रविष्टिहरूको बारेमा सूचित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले यो जानकारी सिफाबाट सिधा प्राप्त गर्नुहुनेछ। यद्यपि यो निर्णय पैसा खर्च गर्दछ, यो प्रयासको लायक छ। यदि तपाईंसँग छ भने तिनीहरू तिनीहरू जान्छन् भाडा ग्यारेन्टी फायदा लिनुहोस्। भाँडाको ग्यारेन्टी प्राय: एक व्यक्ति द्वारा लिइएको छ। यो व्यक्ति अहिले ग्यारेन्टीको रूपमा कार्य गर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि व्यक्ति सही परिस्थिति स्पष्ट छ। यदि तपाइँले पहिले नै भाडाको ऋणको लागि नकारात्मक Schufa प्रविष्टि प्राप्त गर्नुभएको छ भने, यो अवश्य धेरै फायदेमंद छैन यदि तपाई अपार्टमेन्ट भाडामा राख्न चाहानुहुन्छ भने। यो एक व्यवसाय भाडाको पनि सही छ। अहिले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाई बिल्कुल जान्नुहुन्छ, ताकि तपाइँ आपातकालीन अवस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा ग्यारेन्टी लिन सक्नुहुनेछ। दुवै ग्यारेन्जर र भाडादारले पट्टिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। पहिचान कार्डलाई ग्यारेन्टीमा प्रदान गरिएको हुनुपर्छ। मकान मालिक आफैले सुरक्षित राख्नु पर्छ। अब यो हुन सक्छ कि तपाईंसँग बोतल र त्यसपछि ग्यारेन्टी तपाईंका लागि प्रवेश गर्नु पर्छ।
कानूनी रूपमा एक छ surety गलत छैन, अझै यो एक ठूलो भरोसा हो। यदि तपाईंले एक व्यक्ति फेला पाउनुभयो जुन तपाईंको लागि ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुहुनेछ, यो व्यक्तिलाई तपाईलाई निराश पार्न नदिनुहोस्। तपाइँलाई जान्न आवश्यक छ कि तपाईलाई कसैले यहाँ मद्दत गर्न को लागी यहाँ छ। यसैले व्यक्तिलाई सबै चीजहरू थाहा हुनुपर्छ र ठूलो रूपमा सूचित गरिनुपर्छ। यो समस्या हो भने तपाईंको ग्यारेन्टी साँच्चै तपाईंको लागि खडा हुनेछ भनेर यो एक मात्र तरिका हो। सामान्यतया यो चाँडै हुन सक्छ कि तपाईसँग आर्थिक घाटा छ। त्यसपछि यो सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं समय मा भाडा तिर्नुहुन्छ। यद्यपि, ग्यारेन्टीले यो गर्नु हुँदैन। यद्यपि तपाईं सँधै आसपासको क्षेत्रबाट कसैलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, भाडामा गम्भीरता चिन्ता छैन। भाडाको ग्यारेन्टी मुख्यतः आवास किन्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै व्यक्तिले ग्यारेन्टी पाएका छन् भाग्यशाली हुन सक्छ। कहिलेकाहिँ केही संस्थाहरूले तपाईंको लागि भाडाको गारंटी पनि पाउँछन्। फेरि, यो समयमा सधैं भुक्तानी तिर्न महत्त्वपूर्ण छ।
एक भरोसा आधार
तपाईंले सँधै एक विश्वसनीय आधार सिर्जना गर्नुपर्छ। सबैको लागि, कसैले सहयोग गर्न कसैलाई महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो मामला होइन भने, यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण छ। तपाईले सम्पत्ति भाडामा नियमहरू पालन गर्नुपर्दछ। ठेगानहरूलाई सामान्यतया आफन्तहरूको बीचमा आवश्यक पर्दैन। अर्कोतर्फ, यो एक संस्था संग एक भाडा को गारंटी को मामला मा फरक छ। त्यहाँ तपाईंले एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ, किनभने यो ग्यारेन्टी पनि केहि सुरक्षा चाहन्छ। अग्रिममा सबै चीजको बारेमा सूचित गर्न र सजिलै भाडाको गन्तव्यमा प्रवेश गर्न यो महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो भाडाको ग्यारेन्टी पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो किरायेदार को सूचित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सबै प्रश्नहरू हस्ताक्षर गर्नु अघि स्पष्ट हुनुपर्छ र केहि पनि खुला रहनु हुँदैन। यदि तपाईं सुरक्षित हुनु चाहानुहुन्छ भने, तपाईं बैंकबाट पनि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ वास्तवमा कुनै जानकारी छ। यदि मर्मतकर्ता नयाँ किरायेदारको कुनै पनि ऋणको कारण बनाउन सकिँदैन भने एक मालिकको मालिकले स्वतन्त्र रूपमा ग्यारेन्टी प्रस्ताव गर्दछ। त्यसोभए तपाईंले देख्नुहुनेछ कि भाडाको सम्झौता हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ। तथापि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ सँग एक Schufa प्रविष्टि अग्रिममा छ र यो पनि स्पष्ट छ कि कहाँबाट आउँछ। यदि तपाईं गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ भाडामा ग्यारेन्टीलाई कम गर्न सक्नुहुनेछ।
अघिल्लो लेखखाट गद्दे